ETunisia - UBasma Khalfaoui: "Izingxabano ze-ego yizithiyo ezinkulu zokunqoba" - JeuneAfrique.com - Tamban RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO »Tunisia - Basma Khalfaoui:" Izingxabano ze-ego yizithiyo ezinkulu zokunqoba "- JeuneAfrique.com
ETunisia - UBasma Khalfaoui: "Izingxabano ze-ego yizithiyo eziphambili zokunqoba" - JeuneAfrique.com
Umfelokazi womholi ongakwesobunxele uChokri Belaïd, obulewe e-2013, ummeli uBasma Khalfaoui uvele esifundeni saseTunis 1 okhethweni lwePhalamende lwe6 Okthoba. Uvuselela iYoung Africa izifiso zayo zezepolitiki, kodwa futhi namaphutha oguquko kanye nophenyo olwenziwe kabusha ngokufa komyeni wakhe.
Ukuqala kwenguquko yaseTunisia kumakwe nodlame lwezepolitiki, kubandakanya ukubulawa kukaChokri Belaid. Umfelokazi wakamuva, Basma Khalfaoui, ngesinye isikhathi wayengumphathi wefulegi leqembu lakhe, ngaphambi kokujoyina umfelandawonye omusha. Namuhla uhlanganyela ngempilo yakhe phakathi kokufuna iqiniso nokuzibophezela kwezepolitiki.
Ummeli kanye nesishoshovu, akakaze ayeke ukuphishekela umzabalazo wezepolitiki womyeni wakhe ongasekho. Okokuqala ngqa, ugijimela okokuqala ukhetho, esifundeni saseTunis 1, ngaphansi kwelebuli yeDemocratic Social Union (UDS).
UJeune Afrique: Selokhu kubulawa umyeni wakho, uqale waxabana ephathini abe ngunobhala jikelele kanye nomkhulumeli, uWatad (iqembu elihlangene lamaDemocratic Patriots), ngaphambi kokushiya isikhashana kwezepolitiki. Kungani lokhu kukhetha?
Basma Khalfaoui: Inhloso yami yokuqala ngemuva kokushona kukaChokri ukwazi iqiniso ngezimo zokubulawa kwakhe. Bengifuna ukuthi wonke amaqembu ezepolitiki ahlangane ekomitini lezokuvikela, obekungekhona okwenziwa yiWatad. Ngakho-ke ngimshiye e2015 ukuze aqhubeke ekomitini lezokuvikela umndeni. Ngazinikela kulo mkhankaso namadodakazi ami. Bengikudinga kakhulu ukubuyela emuva ngaleso sikhathi, uhlangothi lwezepolitiki lwalunabantu abaningi.
Ube ujoyine inhlangano "iTunisia phambili", ngaphambi kokujoyina i-UDS. Ngabe ucabanga ukuthi lokhu kuhlangana kwezimo kungaqhubeka ngaphezu kokhetho ?
ITunisia phambili yahlanganisa iqembu elalingagculisi labakholelwa kwabakholelwa ezweni lakubo futhi yaqhuba iphrojekthi yeChokri. NgoFebhuwari 2019, abaphathi bayo bangicela ukuthi ngibe sihlalo wengqungquthela yabo. Bengikulungele ukuqalisa phansi indawo yami enkundleni yezepolitiki. Umqondo kwakuwukuhlanganisa izindlela eziningi ezizungeze uhlelo olujwayelekile, ukubeka eceleni ukuziqhenya kwethu.
Ngicabanga ukuthi ukusetha imifelandawonye kuyingxenye ejwayelekile yenqubo yokuguqula
Okokuqala eTunisia phambili, bese kuba yiDemocratic and Social Union, okuletha ndawonye izinto ezaziwa ngokuthi Al-Massar, IJoumhouri, iMovement of Socialist Democrats, noma iqembu lomphakathi laseQadiroune. Ngicabanga ukuthi ukwakha imifelandawonye kuyingxenye ejwayelekile yenqubo yokuguqula. Izingxabano ze-Ego yizithiyo ezinkulu zokunqoba.
Uveze inhloso yakho ukwethula okhethweni lomthetho esifundeni seTunis 1. Lokhu kuzoba ngumkhankaso wakho wokuqala. Ungafaki le nketho ku-2014, manje kungani uhambe manje?
Ngoba sengilungile. Ngokubona kwami, iphalamende elidlule alizange liphilele okulindelwe osopolitiki nabantu. Njengommeli, ngifuna ukubamba iqhaza ohlelweni oluphelele lwezomnotho nolwezenhlalo ngokuqanjwa kwemithetho ePhalamende. Angifuni nje ukuchitha impilo yami yonke ngigxeka.
Umbukiso eTunis, i-23 ngo-Okthoba 2013, ufuna ukuthi uhulumeni ashiye phansi (isithombe somfanekiso). © AP Photo / UHasene Dridi
Eminyakeni eyisishiyagalombili ngemuva kwenguquko, yini ukuhlolwa kwakho ngoguquko lwentando yeningi?
Sisezinhlelweni ezinzima kakhulu, kude kakhulu nezinhloso zenguquko ezazingukuphepha, ezomnotho nezokuhlalisana komphakathi, kodwa futhi nesithunzi. Amaqembu asemandleni kusukela ku-2011 awaqinisekisanga ukudala amabhalansi amasha. Kumataniswa nokuntuleka kwabo kwezomnotho kwamasu. Esikhundleni salokho, bagxila kuma-shenanigans angaphakathi nasezimpikiswaneni, noma ekusungulweni kohlobo lokubuyisana nombuso wakudala, bexhaphaza izimpawu zalo, ngaphandle kokuhamba ngezinyathelo ezidingekayo ezifana nesicelo sokuxolelwa.
Inqubekela phambili yize kunjalo yenziwe ezingeni lesikhungo. Ngabe uhlaka lwamanje lubonakala lunamandla ngokwanele ukuvikela inkululeko?
Cha, ngoba lolu hlelo lwenziwa ukukala kulabo abasemandleni. Kuliqiniso, bekukhona ukuklanywa koMthethosisekelo omusha, kepha kunezikhala eziningi embhalweni futhi amaphuzu athile avula indlela yokuhunyushwa okuyingozi kwesinye isikhathi.
Iqiniso lokuthi ibutho alihlangananga enkundleni yezepolitiki liyimpahla. Ukudalwa kwe i-Independent Authority Higher for Elections (Isie) futhi kuyinto enhle. Yize kunjalo, izikhungo eziningi zisashoda, njengeNkantolo Yomthethosisekelo.
Isigaba sezepolitiki esinobuningi siqala ukuzakhela. Ngabe ucabanga ukuthi amaqembu azokwazi ukunqoba ukwahlukana kwawo kwangaphakathi?
Ngemuva kweNkululeko, iTunisia yaba nesikhathi esincane sezinkinga zezepolitiki. Kepha konke kwasuswa, masinyane sachitha iminyaka engaphezu kwamashumi ayisihlanu ngaphansi kokubusa kweqembu elilodwa. Iminyaka eyisishiyagalombili incane kakhulu yokwakha impilo yobumbano. Ukwahlukana kufanele.
UChokri Belaid, Unobhala Jikelele Weqembu leDemocratic Patriots, e2010. © uHasene Dridi / AP / SIPA
Ukusikeka kwecala lokwahlulela ngokubulawa kukaChokri Belaid kuyinto engathí sina futhi kulimaza iqiniso
Ulwele ukuthola iqiniso ngokubulawa komyeni wakho, uChokri Belaid, nokulahla ukushesha. Kuphi ukuhlolwa?
Ngokuyisisekelo, ifayela lihlukaniswe futhi latholakala amakamelo ahlukene. Le soseji yimbi kakhulu futhi ilimaza iqiniso. Ukuhamba kancane kubonakala kuhlose. Sikholwa ukuthi ijaji lokuqala eliphenyayo, uBashir Akremi, njengabanye, lenziwa ngu-Ennahdha. Ikomidi lezokuvikela ayenzi nje umsebenzi wegunya, kepha umsebenzi omningi wokuphenya. Simeme ukuba khona kohlelo lokusebenza olufanayo olufanayo lokuphepha ngaphakathi kwe-Ennahdha. Kukhona ukuphikwa kwamandla wezepolitiki lapho kunesidingo sokubamba lolu daba.
EChad: Owesifazane waseKamikaze ubulala abantu abayisithupha entshonalanga yezwe - JeuneAfrique.com
"Injongo yami ukubuyisa labo abebephambukile njengami babuyela eRiphabhulikhi"
Iphakethe Laptop - Izeluleko
UCamille Combal: izimfihlo zakhe ezingandile mayelana nesithandwa sakhe uMarie
Senza kabusha umhlaba we-12 ngo-December 2019 - VIDEO
I-Standard de Liège vs Arsenal - Isifinyezo semidlalo yebhola lezinyawo - 12 Disemba 2019 - ESPN
I-backdoor neNetflix ngeke ziphinde !!! - IVIDEO
I-Cameroon - Izipesheli Zomsebenzi315
ABANTU & LIFESTYLE8,658
I-TECH & ITELECOM2,756